जीवनको तुलनामा दुःख सानो हो : डा. पाण्डे-NepalKanoon.com
काठमाडौं । सामाजिक संजालमार्फत पोष्ट गर्दै जनस्वास्थ्यविद् डा.रविन्द्र पाण्डेले नेपालका लागि आगामी ३ हप्ता अत्यन्तै कठिन हुने बताएका छन् । डा. पाण्डेले अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चरम अभाव देखिएकाले अझै तीन हप्ता नेपालका लागि कठिन रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो पोष्टमा आगामी तीन हप्ता घरमै बस्न पनि सुझाव दिएका छन् । तीन हप्ता सावधानी अप्नाएमा त्यसपछि संक्रमणदर घट्दै जाने विश्वास ब्यक्त गरेका छन ।
जीवनको तुलनामा दुःख सानो भएको उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्न किन्न दैनिक बाहिर ननिस्कन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले पसल, बाटो, चोक, खेल्ने ठाउँ, गल्ली सबैतिर संक्रमित भएकाले बाहिर निस्कनै परेको अवस्थामा डबल मास्क लगाएर मात्रै निस्किन आग्रह गरे ।
हाल आएर हावामा पनी कोरोना भइरस लामो समय सम्म रहन सक्ने तथ्य वाहिरिए संगै संक्रमितहरुको संख्या धेरै भएको ठाउँमा हावा मार्फत संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी नै भएको हुदा घरको छत वा वालकोनीमा निस्कदा समेत मास्क प्रयोग गर्नु राम्रो हुने वताइएको छ ।
“यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि डा. पाण्डेको सुझाव छ । सरकारले कडाइ गरेको हाम्रै जिवन बचाउनका लागि हो, तसर्थ हामी सबैजना कडा सेल्फ लकडाउनमा बसौं,“ पाण्डेले अपिल गरेका छन् ।